अस्पतालले भर्ना नलिएपछि, एम्बुलेन्समै मृत्यु भएको युवाको कोरोना रिपोर्ट यस्तो आयो । – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Health/अस्पतालले भर्ना नलिएपछि, एम्बुलेन्समै मृत्यु भएको युवाको कोरोना रिपोर्ट यस्तो आयो ।
अस्पतालले भर्ना नलिएपछि, एम्बुलेन्समै मृत्यु भएको युवाको कोरोना रिपोर्ट यस्तो आयो ।
1,501 1 minute read
काठमाडौं / कोरोनाको आशंकामा नोवेल र कोशिले बिरामीको उपचारनगर्दा उदयपुरका एक युवाको एम्वुलेन्समै मृत्यु भएको छ । पूर्वकै ठुलो हस्पिटलको रुपमा परिचित कोशि र नोवेलले नै युवाको उपचार गर्न मानेन ।
समयमै हस्पिटलले उपचार नगर्दा कटारी नगरपालिका ५ का २३ बर्षिय पदम राईको एम्वुलेन्समै मृत्यु भएको हो । मृत्यु भएपछि युवालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको हुन सक्ने भन्दै कोसी अस्पतालको प्रयोगशालामा स्वाब संकलन गरियो । तर उनको रिपोर्ट भने नेगेटिभ अयो ।
यसरी हस्पिटलले रोग पक्ता लगाउन नसकी कोरोनाको निहुमा अन्य सामान्य रोगका विरामीहरुलाई पनि मारिरहेका छन् । यो भन्दा पहिले पनि नोवेलले उदयपुरको सुत्केरी महिलालाई उपचार बाट बन्चित गरेका थिए ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. चुुमनलाल दासले रिपोर्ट नेगेभिट आएपछि शव शनिबार बिहान परिवारका सदस्यलाई बुझाइएको जानकारी दिनुभयो । शंकास्पद देखिएका कारण उपचारका लागि तत्काल भर्ना गर्ने अवस्था नभएको कारण बिरामीको एम्बुलेन्समै मृत्यु भएको उनको दासले बताउनुभयो ।
उपचार नपाएर पदमको मृत्यु भएपछि पदमको आमा र बहीनी एम्वुलेन्समै बेहोस भए । अस्पतालले उपचार नगरेपछि करिब १ घण्टाको अवधिमा पदमको मृत्यु भएको एम्वुलेन्स चालक सुवास तामाङले बताउनुभयो ।
मृतक पदमका आपन्त रोमा गोलेले हस्पिटलले लापर्वाही गरेर बिरामीको ज्यान गएको बताउनुभयो । उहाँले बिरामीको अन्तिम विकल्पनै हस्पिटल रहेपनि हस्पिटल बाट यस्तो परिणाम आएकोमा दुख व्यक्त गर्नुभयो ।
मृत्यु भएको युवाको शव करिब २ घण्टा सम्म एम्वुलेन्समै रह्यो । उता बेहोस भएकी आमा र बहिनी पनि १ घण्टा सम्म चेत विचेत रहीरहीन त्यो अवस्थामा पनि त्यहाँका कर्मचारी र डाक्टरहरुले कुनै किसिमको दया देखाएन आफ्नो कर्म गरेन् ।
पदमका आफन्तहरुले यस्तो स्वार्थी हस्पिटलहरुलाई आवश्यक कार्वाहिको माग गरेका छन् । हस्पिटल र डाक्टरको काम कर्तव्यलाई जिम्मेवारी लिन नसक्ने त्यस्ता हस्पिटल र डाक्टरलाई कार्वाही गर्नु पर्ने उनिहरुले माग राखेका छन् ।
खुशीको खबर, चीनले बनायो कोरोनाविरुद्ध नयाँ खोप, १ हजार १ सय मानिसमा प्रयोग गर्दा भयो सफल
सावधान ! झुक्किएर पनि नखानुहोस् यी ७ किसिमका रोगीले लसुन, नत्र पुर्याउँछ यस्तो असर